कोरियाली चलचित्रको स्वाद
कोरियाली साहित्य र कलामा मृत्युलाई ठूलो ट्रयाजेडीका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले कोरियाली अधिकांश चलचित्रले मृत्युपछिको अवस्थालाई ज्यादै गम्भीरतापूर्वक पेश गरिन्छ । प्रदर्शित चलचित्रले पनि यही कुराको बोध गराएका थिए । ...
हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ ?
वेभ प्रडक्शन प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण भएको तथा दीपक रायमाझीले निर्देशन गरेको चलचित्र हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ ? को सुटिङ समाप्त भएको छ । यो कुरा शायद पत्रकारहरुलाई थाहा हुने थिएन होला, तर निर्देशक रायमाझीले यो कुरालाई गर्वका साथ एउटा पार्टीको आयोजन गरी जानकारी गराए । ...
संसारभरका प्रख्यात निर्देशकका प्रख्यात सिनेमा देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ...
अर्को सफलता !
उक्त महोत्सवमा भेला भएका ७० चलचित्रमध्ये उनको चलचित्र उत्कृष्ट ३० मा पर्न सफल भएको र अन्तिम नतिजा आगामी नोभेम्बर महिनामा सार्वजनिक हुने पनि जानकारी आफूले पाएको उत्तमले बताएका छन् । ...
सहयोगकर्ताहरुको भनाइ थियो- यो सानो सहयोगले उहाँको घाउमा मल्हमको काम गरोस् !...
भनिन्छ, घरको कुरा बाहिर भन्दै हिँड्नु हुन्न रे ! तर जब कुरा युवराज लामाको आउँछ, यो उक्ति फ्लप हुन्छ । उनी आफ्ना छोरा केही समयअघिसम्म लागू औषधका आदि थिए भन्न दायाँबायाँ हेर्दैनन् । ...
चलचित्रका नायक लोकेन्द्र कार्कीले देशको शान्ति सुव्यवस्था र चलचित्र उद्योगको उन्नतिका लागि ११ ब्राह्मणलाई भेला गराई शान्ति होम गराएका छन् । ...
नेपाली कांग्रेसकी कट्टर समर्थक विपना थापा कसरी माओवादी नेतृत्वले सम्हालेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र बोर्डमा सदस्य नियुक्त भइन् त ?...
Data 31 - 45 of 116 [Total 8 Pages]